- Tixdani ma aha mid dadka ku jiidanaysa kanaalka ee waa Ciise, ayuu yidhi Per Åkvist.
Sawirka: Dunida maanta.
Guusha taxanaha barnaamijka Himlen TV7 ee kursiga hore waa mid deg deg ah.
Waxaan ka mid noqday barnaamijkii ugu horreeyay ee himilada TV7 ee tabinta wacdinta Kursiga hore. Illaa iyo hadda, 22 barnaamij ayaa la duubay, marka lagu daro barnaamijkeyga, hal barnaamij oo kale ayaa la muujiyay. Barnaamijkaas, Faysal Alami ayaa lagu wareystay, oo bogga barnaamijka lagu tilmaamay inuu ahaa " boqorka daroogada ee Lidingö ". Guusha barnaamijyadan ayaa isla markiiba ahayd.
- Barnaamijku wuxuu horeyba uga hadlayey dadka kale markay daawanayeen. Xitaa wuxuu ku saabsanaa barnaamijkeena ugu caansan ilaa iyo maanta, Israel News, oo habeen walba la sii daayo, ayuu yidhi Per Åkvist.
Tixda taxanaha ah "kursiga hore" waxaa soo saaray wacyigaliyaha kanaalka TV Per Åkvist. Rubuc saac, wuxuu ku dhex wareegayaa gawaarida raaxada ee amaahda wuxuuna la hadlayaa qof rakaab ah oo la wadaagaya markhaatigiisa isla markaana dhiirrigelinaya salaadda.
- Waxay ahayd inaan joojiyo oo aan qallajiyo ilmadayda intii aan duubayay. Markaa waa farxad aad u weyn inaan maqlo dadka oo ka sheekaynaya xilliyada ay nolosha ku beddelayaan Ciise, ayuu yidhi Per Åkvist.
Laba barnaamij ayaa ilaa hadda la baahiyay
Dunida maanta waxay qortay :
Martida ku jirta labada qaybood ee ilaa hada la baahiyay waa blogger-ka Christer Åberg iyo Faisal Alami, siday u kala horreeyaan, kuwaas oo bogga barnaamijka lagu tilmaamay inuu ahaa "boqorka daroogada ee Lidingö".
Faysal Caalami | Kursiga hore (mukhaadaraadka ka ganacsada ee nabad ka helay Ilaah)
"Faysal wuxuu ahaa boqorka daroogada ee Lidingö wuxuuna xukumayay cabsi. Markii noloshu bilawday inay hoos udhacdo, wuxuu iska casilay Boqor Ciise kahor".
Christer Åberg | Kursiga hore (Waxaa lumay labo xubnood oo reerka ah laakiin waxaa helay wadadii farxadda loogu laaban lahaa)
"Waxa kaliya ee xambaarsan waa ciise. Christer Åberg waxa uu soo maray tan caqabadaha adag ee nolosha. Christer waa blogger iyo qoraa wuxuuna maamulaa apg29.nu, iyo waxyaabo kale."
Himlen TV7 waxay rajeyneysaa in jameecooyinka iyo shaqsiyaadka ay qaadan doonaan barnaamijka aalad loogu talagalay wacdintooda. Fikradaha hadda la soo saaray ee ku saabsan sida daawadaha u heli karo Kitaabka Quduuska ah ama waxyaabo kale oo dabagal ah, adduunka ayaa maanta qoraya.
Ka daawo barnaamijyada soo socda Himlen TV7 .
Vecka 19, tisdag 11 maj 2021 kl. 23:58